कसैसँग लडाइँ नगर्ने स्वीट्जरल्यान्ड « Tuwachung.com
१. गभर्नरद्वारा मोबाइल बैंकिङमार्फत हलेसीमा ११ हजार १११ भेटी
२. मेयर राईको त्यो रेडियो
३. गायिका मीना राईलाई घुम्न मन पर्ने ५ ठाउँ
४. ‘लकडाउन’ले फेसन डिजाइनरको जागिर खोसिएपछि पेन्टिङ
६. राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बाल्यकाल
७. सडकमा कराउँदै तरकारी बेच्ने कलाकारको काठमाडौंमा घर
८. नछेकिदेऊ मेरो बाटो, नरोकिदेऊ मेरो पाइला
९. तेजपत्ता सेवन गर्नेको मधुमेह चट्
१०. नामजस्तै कामलाई माया गर्ने ममता
११. सर्पले डस्दा १५ जनाको ज्यान गयो, २० घाइते
१२. भालुवाङदेखि काठमाडौंसम्म
नाकिमा	२०७७ माघ ८, २३:४८
विकासको कुरा गर्नासाथ स्वीट्जरल्यान्डको उदाहरण दिने गरिन्छ । त्यसको एउटै कारण छ– त्यहाँको विकेन्द्रीकरण शासन व्यवस्था । केही समय अघिसम्म नेपालमा एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था थियो । हरेक कुरा केन्द्रको नियन्त्रणमा हुने गथ्र्यो । नेपालीले सानोतिनो कामका लागि केन्द्र धाइरहनुपर्ने दुःखदायी जीवन भोग्दै आइरहेका थिए । यसले समय र खर्च बर्बाद पारिरहेको थियो । स्वीट्जरल्यान्डका जनता यस्तो समस्याबाट मुक्त छन् । हरेक कुराको मुक्तिका लागि संघीयता आवश्वक पर्दोरहेछ भनेर नै स्वीट्जरल्यान्डको उदाहरण दिने गरिएको हो ।
स्वीट्जरल्यान्ड नेपालभन्दा सानो छ । तर, २६ वटा स्वायत्त प्रदेशसमा विभाजित छन् । त्यहाँको संघीयता संसारकै उत्कृष्ट नमुना हो । यसकारण त्यहाँका प्रदेशलाई अधिकतम स्वायत्तता प्रदान गरिएको छ भने सबै प्रदेशलाई समान अधिकार दिइएको छ । प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै संविधान, प्रतिनिधिसभा, सरकार र अदालत छन् ।
स्वीट्जरल्यान्ड नेपालजस्तै जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुक हो । जर्मनी, फ्रेन्च र इटालियन गरी स्वीट्जरल्यान्डमा मुख्यतः तीन भाषिक सांस्कृतिक क्षेत्र छन् । तिनीहरू सबैले संघीयता, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र र तटस्थता (कसैसँग लडाइँ नगर्ने)लाई स्वीकारेका छन् ।
भौगोलिक आधारमा स्वीट्जरल्यान्डलाई दक्षिणमा स्वीस हिमशृंखला, मध्यभागमा टापु र उत्तरमा जुराग पर्वत गरी तीन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । दक्षिणको ६० प्रतिशत भू–भाग हिमशृंखलाले ओगटेको छ । स्वीट्जरल्यान्डलाई युरोपभरिकै शुद्ध पानीको मुहान मानिन्छ । यहाँ जेनेभा, कोन्सट्यान्स, म्याग्गिवइरजस्ता सुन्दर ताल छन् । त्यहाँ जम्मा १ हजार ५०० ताल छन् । ताल र हिमनदीले स्वीट्जरल्यान्डको ६ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । त्यसैगरी, स्वीट्जरल्यान्डमा ४ हजारभन्दा बढी उचाइ भएको करिब १०० हिमाल छन् । जसमध्ये ४,६३४ मिटर उचाइसहितको डुफोरस्पिट्ज सबैभन्दा अग्लो हिमाल हो भने ४,४७८ मिटर उचाइसहितको म्याटरहोर्न हिमालचाहिँ त्यहाँको सबैभन्दा चर्चित हिमालमा पर्छ ।
सन् १८१५ यता यसले कुनै पनि देशसँग युद्ध गरेको छैन । यो देश सन् २००२ मा आएर मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको हो । यो विभिन्न विश्वव्यापी संगठनको छाता संगठन हो । यसमा वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटी, रेड क्रस, वल्र्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, फिफा आदि पर्छन् । युरोपेलीस्तरमा चाहिँ ‘युरोपियन फ्रि ट्रेड एसोसिएसन’को संस्थापक हो– स्वीट्जरल्यान्ड । तर, यो युरोपियन युनियनको सदस्य भने होइन ।
यसकार चन्द्रकला देखिन्छ चन्द्रमामा
चन्द्रमाले पृथ्वीलाई घुम्न २९ दिन लगाउँछ । यसरी घुम्दा पृथ्वीबाट चन्द्रमा कहिले पूर्ण गोलाकार देखिन्छ
मेयर राईको त्यो रेडियो
हलेसी (खोटाङ) । संवत् २०३८ सालतिर तात्कालिक मंगलटार गाउँ विकास समितिका लप्टन गोकुल राईले शान्ति
पिसाब फेर्दा कुकुरले एउटा खुट्टा किन उचाल्छ ?
कुकुरले पिसाब फेर्दा एउटा खुट्टा उचाल्ने गरेको हामीले सधैं देख्दै आएका छौं । यसबारे त
अपराधी समात्ने चस्मा
चस्माले अपराधी पत्ता लगाउँछ भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ । तर, विश्वास गर्न कर लागेको छ
भाषाको बुझाइ भाषा मानिसको सबैभन्दा व्यक्तिगत र सार्वभौम वस्तु हो । हरेक व्यक्तिको भाषा आफ्नै
त्यसपछि राष्ट्रपति रुज्बेल्ट परमाणु बम बनाउन सहमत
एनरिको फर्मीलाई नाभिकीय क्रियाको खोजकर्ता तथा जन्मदाता भन्ने गरिन्छ । वास्तवमा उनी परमाणु ऊर्जाको जन्मदाता
‘जेकब्सन्स ओर्गन’को सहायताले सिकार पत्ता लगाउने सर्प
सर्पले सुन्न सक्दैन । उसले आफ्नो शरीरले जमिनको कम्पन मापन गरेर आफूवरिपरिको स्थिति जानकारी लिन्छ